राजपा र फोरम सरकारमा नगएका कि नलगिएको ?
- नेपाली सन्देश मङ्लबार, चैत्र १३, २०७४ , 4.3K जनाले हेर्नुभयो
काठमाडौँ । वर्तमान सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई पनि सहभागी गराउने चर्चा एकताका निकै चर्चामा थियो ।
दिनमा तीन–तीन पटक वार्ता पनि भएका थिए । तर, अहिले सरकारमा सहभागी गराउने चर्चासमेत हुन छाडेको छ ।
सरकारले सोधखोज गर्न पनि छाडेको छ ।
यसबाट वामगठबन्धनले राजपा र फोरम नेपाललाई सरकारमा लिन चाहिरहेको छैन जस्तो देखिन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ कि सरकारले फोरम र राजपालाई नलिएको हो कि ती दल नगएको हुन ?
वार्ता र संवादका लागि यी दुईवटै दल तयारी अवस्थामा छन् । तर, सरकारको पक्षबाट कुनै पहल भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल भन्छन्, ‘राजपा नेपालको बारेमा त भन्न सकिदैन । तर, फोरम नेपाललाई सरकारमा ल्याउन लागि तयार छौँ । उनीहरुको पार्टीभित्र विवाद भएको कारणले आउन नसकेको हो ।’
उनले केही दिन पहिले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, ‘राजपा नेपालसँग सरकारमा आउने कुरा ‘क्लोज’ भएको छ ।’
राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले यति स्पष्टसँग भन्दा पनि सरकारमा लिने र नलिने विषय अन्यौल देखिएको छ ।
राजपा नेपालका सहमहामन्त्री सुरेन्द्र झा भन्छन्, ‘हामी सरकारमा नगएको हो ।’
अंकगणितका हिसावले बामगठबन्धनलाई अहिले अन्य दलको आवश्यकता नै छैन ।
बहुमतको सरकार निर्माण गरेको छन् ।
‘अब सबै दललाई समेटेको छु भनि देखाउन मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले राजपा र फोरमलाई सरकारमा लिनसक्नुहुन्छ अन्यथा कुनै आवश्यकता नै छैन’ झाले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने ।
राजपा नेपाललाई सरकार लैजान बामगठबन्धन इच्छुक नदेखिएको केही घटनाक्रम हेर्न सकिन्छ ।
जस्तो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको चुनाव हुँद थियो । वार्ता भए । थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई जुश पनि खुवाइयो । जब सबै चुनाव सम्पन्न भए, वार्ता पनि बन्द । रेशम चौधरीलाई शपथ खुवाउने र रिहाई गर्ने चर्चा पनि बन्द ।
यदि सरकारमै लैजाने मनस्थिति भए राजपा नेपालका लागि पनि मन्त्रालय छुट्याएर राख्न सकिनथ्यो । यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि सरकारले पनि राजपा नेपाललाई सरकारमा लिन चाहेको छैन । फोरमका लागि भने मन्त्रालय खाली राखिएको छ ।
तर, राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘सरकारमा जाने सम्भावना अहिले पनि समाप्त भएको छैन । किनभने हामीले न सरकारमा जाने निर्णय गरेका छौँ न नजाने निर्णय गरेका छौँ । हाम्रो मुल मुद्दा सविधान संशोधन हो । सविधान संशोधनको विषयमा स्पष्ट भएपछि हामी सरकारमा जान्छौँ ।’
राजपा नेपाल र फोरम नेपालका नेताहरु भन्छन्, ‘हाम्रो माग पूरा नगरेको कारण हामी सरकारमा नगएको हो ।’
यसमा कति सत्यता छ त्यो कुरा राजनीतिक सल्लाहकार रिमालका कुराबाट प्रष्ट हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘फोरम नेपालसँग तीन बुँदे सम्झौताको खाका तयार भइसकेको छ । त्यसमा हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ जुन दिन त्यो पार्टीले मन्त्रीको नाम दिन्छन् त्यो दिन सहमतिपत्रमा हस्तक्षर गरेर मन्त्रीको सपथग्रहण हुन्छ ।’
यता, फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादव भन्छन्, ‘सरकारमा जान हामीलाई हतार छैन । हाम्रा मुद्दाप्रति सरकार प्रष्ट नपारेसम्म सरकारमा जाँदैनौ भन्ने कुरा हमीले भनिसकेका छौ ।’
उनले सरकारसँग हालसम्म कुनै सहमति नभएको दावी गर्दै विभिन्न विषयमा छलफल भएपनि कुनै विषयमा सहमति नभएको प्रष्ट पारे ।
सरकारसँग हुने वार्तामा सहभागी हुँदै आएका महासचिव यादवले माओवादी केन्द्र र एमालेले ठग्ने, झुक्याउने काम मात्र गरेको आरोप लगाए । उनी भन्छन्, ‘उहाँहरुको कुरामा भर पर्ने हो भने आजै मन्त्रीको शपथ खाए हुन्छ । त्यसमा यसपटक हामी सचेत छौँ ।’
राजपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य डा.शरद यादवले सविधान संशोधन विना सरकारमा जान नहुने सल्लाह दिन्छन् । उनले भने, ‘दलका केही नेताहरु सरकारमा जाउँ कि जाउँ जस्तो गर्नुहुन्छ तर सत्ता स्वार्थमा कुनै सम्झौता गर्यो भने मधेशको कल्याण हुँदैन । त्यसैले सविधान संशोधन नगरिकन सरकारमा जानु हुँदैन ।’